Askari ka tirsanaa ciidamada dowladda oo saakay dil toogasho ah lagu fuliyay
Mjournal : — Maxkamada darrada koowaad ee ciidamada qalabka sida dowladda Soomaalya ayaa aroornimadii hore ee saakay xukun dil ah ku fullisa askari horay uga tirsanaa ciidamada dowladda oo lagu magacabo jiray Maslax Ciise Iimaan oo horay u dillay qof rayid ah. Askariga...
Qarax khasaare sababay oo ka dhacay magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha dhexe
Mjournal : — Ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa lagu waramayaa in qarax lagula eegtay magaalada Jowhar, sida ay warbaahinta u sheegeen dad goob joogayaal ah oo ku sugan magaalada. Ciidamada dowladda faderaalka oo qaabilsan sugida amniga ee degmada ayaa qaraxa...
Soomaalida Koonfurta Suudaan oo lafahooda la soo baxsanaya kadib markii ay soo xoogeesteen dagaallada
Mjournal : –Safaarada Soomaalida ee dalka Koonfurta Suudaan ayaa siweyn mashuul ugu ah soo daabulista muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku go’doonsan dalkaas, xilli dagaalo ay dib uga cusboonaadeen Gobolada Koofurta Sudan. Shaafici Nuur Calas oo ah xog-hayaha koowaad ee...
Wada hadalladii Soomaaliya iyo Soomaaliland oo dib u dhac ku yimid
Mjournal : — Wasiirrka wasaarrada arrimaha dibada maamulka Soomaaliland Max’ed Biixi Yoonis oo warbaahinta la hadllay ayaa sheegay in dib u dhac uu ku yimid wada hadalladii la fillayo in ay dhawaan ku yeeshaan dalka Turkiga xubno ka kala socda Soomaaliya ...
Dab baabi’iyay keyd dawo oo ay laheyd hay’adda MSF mid ka mid ah xerryaha gobolka W/bari Kenya
Mjournal : — Keyd dawo ah oo ay laheyd hay’adda MSF oo ku jiray bakhaaro ku yaala xerrada Dhagaxley ee gobolka W/bari dalka Kenya ayaa lagu waramayaa in gabi ahaanba uu baabi’iyay dab ka kacay shalay gellinkii dambe xerrada. Dawooyinkan iyo qalabka ayaa waxaa loogu...
Guddiga doorashada Puntland oo soo saaray hab raaca doorashada madaxtinimada
Mjournal :– Guddiga ku-meel-gaarka ah ee doorashada maamul gobolleedka Puntland oo maanta shir jaraa’id ku qabtay magaalada Garoowe ee xarunta maamul gobolleedka Puntland, ayaa soo saaray hab raaca doorashada madaxtinimada maamul gobolleedka Puntland. Guddoomiyaha Guddiga...
Baarlamaanka federaalka oo u hanbalyeeyay baarlamaanka maamul gobolleedka Puntland
Mjournal :– Fadhi maanta ay ku yeesheen magaalada Muqdisho xildhibaannada baarlamaanka Soomaaliya ayaa loogu hambalyeeyay doorashada guddoonka Golaha Wakiilada ee Maamul Goboleedka Puntland. Kulanka oo uu shir guddoominayay Pro Max’ed Cismaan Jawaari ayaa waxaa soo xaadiray...
Shirka Baydhabo oo la sheegay in leysku raacay dhismaha maamul ka kooban sadex gobol
Mjournal : — Wararka naga soo gaaraya magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa sheegaya in kulanka bilihii ugu danbeeyay loo fadhiyay magaalada Baydhabo leysku raacay ugu danbeyntii in maamulka halkaa lagu dhisayo uu noqdo mid ka kooban sadex gobolk, halka markii hore...
Ra’iisal wasaare C/wali oo Puntland ku amaanay doorashada guddoonka baarlamaanka
Mjournal : — Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya C/wali Sheekh Axmed ayaa si weyn u soo dhoweeyay doorashadii guddoonka Baarlamaanka Puntland ee shalay lagu soo gaba gabeeyay magaalada Garowe ee xarunta u ah dawlad goboleedka Puntland ee Soomaaliya. Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya...
Lacago shuruud ah oo lagu xirray musharixiinta u taagan xilka madaxweynaha maamul gobolleedka Puntland
Mjournal :– Sida laga soo xigtay mas’uul ka tirsan xubnaha gollaha wakiilada maamul gobolleedka Puntland, waxaa sare loo qaaday lacagaha shuruuda h ee laga doonayay shaqsi kasta oo u taagan kursiga madaxweynaha maamul gobolleedka Puntland. Wararku waxaa ay sheegayaan in...
Maamulka degmada Yaaqshiid oo beeniyay in degmadaas qeybo ka mid ah ka taliyaan Al-shabaab
Mjournal : — Gudoomiyaha degmada Yaaqshiid Muxiyadiin Xasan Jurus oo shalay ka bad baaday qarax miino loo dhigay gaarigiisa oo marayay agagaarka Carafaat ayaa beeniyay in wararka sheegaya in xaafado ka tirsan degmadiisa ay ka taliyaan Al-Shabaab. Muxiyadiin Jurus ayaa...
Musharixiinta Puntland oo soo dhaweeyay gu’doonka cusub ee la doortay
Mjournal :– Iyadoo maalintii shalay magaalada Garoowe lagu doortay gudddoonka gollaha wakiilada maamul gobolleedka Puntland, ayaa waxaa siweyn u soo dhaweeyay doorashada guddoonka cusub qaar ka mid ah musharixiinta u taagan xilka madaxweynaha Puntland. Musharaxiinta ayaa...
Ra’iisal wasaare C/wali oo kulan la qaatay wakiilka QM Nicholas Kay
Mjournal : — Ra’iisul wasaaraha Soomaaliy C/wali Sheekh Axmed ayaa maanta xafiiskiisa kulan kula qaatayergayga gaarka ah ee QM u qaabilsan arimaha Soomaaliya, waxaana ay ka wada hadleen xiriirka adage ee u dhexeeya QM iyo Soomaaliya. Ra’iisul wasaare C/wali ayaa uga...
Saciid Xassan Shire oo loo doortay guddoomiyaha gollaha wakiillada maamul gobolleedka Puntland
Mjournal : — Warar xiligan naga soo gaaraya magaalada Garoowe ee xarunta maamul gobolleedka Puntland ayaa sheegay in la soo gabagabeeyay doorashadii guddoonka baarlamaanka oo la sheegay in uu ku guuleystay Saciid Xassan Shire. Wareegii ugu danbeeyay ee codbixinta waxaa...
Kooxda Al-shabaab oo afduubatay madaxii hay’adda WHO ee gobolka Baay
Mjournal : — Wararka naga soo gaaraya gobolka Baay ayaa sheegaya in xoogagga Al-shabaab meel dulleedka ka ah deegaanka Buur-hakaba ku afduubteen madaxii hay’addaha WHO Dr. Abuukar Hashimi. Wararku waxaa ay sheegayaan in xoogaga ka tirsan Al-shabaab deegaannka lagu magacaabo...
Soomaaliland oo sheegtay in ay bilaabanayaan wada hadalladii ay la lahaayeen dowladda dhexe ee Soomaaliya
Mjournal : — Wasiirrka arrrimahad dibada Soomaaliland Max’ed Biixi Yoonis ayaa sheegay in wareegii shanaad ee wada hadaladii u dhaxeeyay Somaliland iyo Soomaaliya ay dalka Turkiga ka furmi doonaan horaanta todobaadkan. Wasiirka Arrimaha dibadda Maxamed Biixi Yoonis, ayaa...
Saacadaha soo socda oo la fillayo in lagu dhawaaqo xubnaha gollaha wasiirrada
Mjournal : — Wararka ka soo baxay xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya ayaa sheegay in heer-gabo-gabo ah mareyso ku dhawaaqista xubnaha gollaha wasiirada xukuumada Soomaaliya, waxaana lagu wadaa in ra’iisal wasaare C/wali ku dhawaaqo xubnihii gollaha wasiirrada saacadaha...
Madaxweyne Xassan Sheekh iyo ra’iisal wasaare C/wali oo kulan hoose wada qaatay
Mjournal : — Ilo xog-ogaal ah oo ku dhaw dhaw xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya ayaa sheegaya in xalay kulan hoose uu dhaxmaray madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xassan Sheekh Max’uud iyo ra’iisal wasaare C/wali Sheekh Axmed, iyaga oo isla eegaya sida la sheegay xubnaha...
Ganacsato Soomaaliyeed oo u xirnaa dilka muwaadiin South Africaan ah oo xabsiga laga sii daayay
Mjournal : — Wararka naga soo gaaray dalka Koonfur Africa ayaa sheegaya in xabsiga laga sii dayay afar ganacasato Soomaaliyeed ah oo muddo u xirnaa dil ay u geysteen saddex ruux oo Koonfur Afirkaan ah oo doonayay in ay dhac u geystaan dukaan ay lahaayeen. Ganacsatadan...
Ganacsade xalay loo dillay telleefoonkiisa gacanta degmada Dherkeenley ee gobolka Banaadir
Mjournal : — Kooxo hubeysan oo la sheegay in ay ku labisnaayeen dareyska ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa xalay ku toogtey degmada Dherkeenley ee gobolka Banaadir nin ganacsade ahaa, kadib markii leysku dayay in laga qaato telleefoonkiisa gacanta. Dad goob joogayaal ahaa...